Global Voices teny Malagasy » Ny tontolon’ny blaogy Nizeriana – herinandro voalohan’ny Novambra 2005: · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Novambra 2018 3:02 GMT 1	 · Mpanoratra Sokari Ekine Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Mediam-bahoaka
Tratry ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalan'izy ireo hankany amin'ny Oniversite Obafemi Awolowo  any Ile-Ife avy tany Lagos i Gbenga Sesan  sy i Edward  avy ao amin'ny Jangbalajugbu Homeland Stores . Niala ny arabe ilay fiara ary nitsambikimbikina imbetsaka, heveriko araka izany fa manam-bitana be izy ireo mbola afaka mandeha na miaina fotsiny aza taorian'izany – noho izany, faly aho fa tsy nisy naninona ianareo.
Derain’ i Timbuktu Chronicles  ny asan'i Bunker Roy izay nametraka ny Kolejy Barefoot t tamin'ny 1972 niaraka tamin'ny ”faharesen-dahatra fa eo anivon'ny fiarahamonina no isian'ny vahaolana amin'ny olana ambanivohitra”. Ny fanoloran'i Bunker Roy tamin'ilay fivoriana Pop!Tech  tany Etazonia vao haingana:
nanamafy ny finoan'ny olona ny tanjaky ny olombelona, toy ny nolazain'i Mahatma Ghandi tenany mihitsy hoe ”Ianao no tokony fiovana tianao ho hita eo amin'izao tontolo izao”
Tsaroan’ i Musings of a Naijaman  i Olamide Adeyooye ilay vehivavy tsy hita, ary indrisy, hita faty tao amin'ny Mississippi.
Nanao ezaka fanetsiketsehana goavana be tamin'ny aterineto ireo nàmany mba hanampiana amin'ny fitadiavana azy, indrindra manoloana ilay lazaina fa fankafizan'ny haino amanjery amerikana ireo ”mavo volo sy manga maso niharam-boina ” ary tena mampalahelo fa toy izao no niafaràny……….Tamin'ireo hafatra rehetra navoakan'ny olona teny amin'ny tranonkala maro, ity iray ity no tena tiako – Tsy misy afaka mampijaly azy intsony izao!
Manolo-kevitra ny bilaogin'i Chippla fa raha handany vola be amin'ny fanamboarana fanafody hiadiana amin'ny tazomoka, tokony ampiasaina hitadiana fomba ”hamonoana ilay moka vavy mitondra ny mikraoba miteraka ny tazomoka” ireo fanampiana ara-bola. Vahaolana iray ihany koa ny fiverenana amin'ny fampiasana ny DDT (Dichloro-diphenyl-trichloroethane) izay nosakanana tany amin'ny firenena sasany tany amin'ny taonjato faha-1970 fa nolazaina ho toy ny ”mpandoto organika”. Manolotra hevitra izy hoe:
”Mila lanjalanjaina miaraka amin'ireo olana mandravarava azo amin'ny tazo moka ireo loza mety ho azo ateraky ny DDT eo amin'ny tontolo iainana”
Mitatitra momba ny sarimihetsika vaovao The Bitter Aftertaste , izay mitatitra ny varotra ara-drariny ny Africa Unchained . Antenain'ireo mpamokatra sarimihetsika, WorldWrite, izy io :
”hanao fanamby amin'ny finoana hoe fifangaroan'ny fahantrana any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana ny varotra ara-drariny. Milaza izany fa nofitahina hino ireo mpanjifa tandrefana nilazana fa fomba mahomby hiadiana amin'ny fahantrana ny varotra ara-drariny, kanefa tsy manao na inona na inona mba hiadiana amin'ny tena antony lalina mahatonga ny fahantrana izy. io”
Samy mampahatsiahy antsika i Naijablog  sy i Nigerian Times  fa manamarika ilay famonoana tsy nandalo fitsaràna atao an'i Ken Saro-Wiwa sy ny Ogoni valo ny 10 Novambra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/18/129930/
 Oniversite Obafemi Awolowo: http://www.oauife.edu.ng/
 Gbenga Sesan: http://gbengasesan.com/
 Homeland Stores: https://shop.homelandstores.com/
 Timbuktu Chronicles: http://timbuktuchronicles.blogspot.com/2005/11/barefoot-college.html
 Kolejy Barefoot: http://www.barefootcollege.org/
 Musings of a Naijaman: http://uknaija.blogspot.com/2005/10/more-nigerian-sadness.html
 The Bitter Aftertaste: http://www.studentfilmmakers.com/news/article_738.shtml
 Africa Unchained: http://africaunchained.blogspot.com/
 Nigerian Times: http://nigeriantimes.blogspot.com/2005/11/ken-saro-wiwa-not-yet-uhuru.html
 Ken Saro-Wiwa sy ny Ogoni valo : http://www.remembersarowiwa.com/